Uchwepheshe we-Semalt: Ungamisa kanjani ukugaxekile kogaxekile okuvela ku-Google Analytics
Ukuqinisekisa ukuthi umuntu une-Google Analytics enhle yindlela kuphela yokuqinisekisa ukuthi i-umkhankaso wokumaketha owenziwa ibhizinisi noma umuntu usebenza kahle nokuthi iwebhusayithi isebenza njengoba kulindeleke. Kodwa-ke, kule nquboyokuthuthukisa i-Google Analytics, kunezici ezithile eziqinisekisiwe zokuthinta ukusebenza kwama-analytics. Ukudluliselwa kogaxekile kuyisisulu kuningiabathengisi.
Igor Gamanenko, the i-Semalt Umphathi Wempumelelo Yomthengi, angathanda ukugxila ekubhekeni kogaxekile ngokuqondilelivela ngamafomu amabili: abakwa-spam web crawlers, kanye nomgwaqo wokudlulisa umoya:
Ugaxekile we-web crawlers. Iningi liyizinqubo ezizenzakalelayo ezikhomba i-website ngendlela efanayoukuthi i-Google iyayenza. Abanye abanjengoGooglebot benza ukuba khona kwabo kwaziwe futhi ngaleyo ndlela kungabandakanywa emibikweni ye-analytics. Ezinye ezingabangeliisilinganiso se-bounce esingu-100%
ama-Ghost referrals. Lawa athumela izicelo ze-HTTP ezikhohlisayo ezinokukwazidala ukuthunyelwa kogaxekile. Zihlanganisa nomgwaqo osemthethweni kodwa azihambeli website kodwa zibale umbiko wokugcina.
Izizathu zokudala ukudluliselwa kogaxekile
Abantu bangadala ukuthunyelwa kogaxekile kwiwebhusayithi ngezizathu eziningana. Kungenzeka kube ngenhlosonoma ngokungenhloso. Esinye sezizathu zokuthi kungani ukuthunyelwa kogaxekile kubonakala kwiwebhusayithi kungenxa yohlelo oluvilaphayo. Abanye abahleli bayakwazi ukuqedelaikhodi yebhokisi, kuze kube yilapho behluleka ukuzikhomba kahle. Abanye abathuthukisi abafisi ukuba ne-bots yabo ezenzakalelayokuvinjelwe yizinhlelo ezisethwe yi-Google..Ngakho-ke, ngokuzifihla ngokuthi yi-traffic ye-web esemthethweni, bafika ukufinyelela kusayithi ngaphandleukuphazamiseka. Abanye abathuthukisi abanobubi bakhetha ukusebenzisa ukuthunyelwa kogaxekile ukuze bathole isifiso sabasebenzisi futhi bafake i-malware kumakhompyutha abo.Njengoba lezi zixhumanisi zibukeka ziqotho kubasebenzisi, azikho isizathu sokubabaza.
Ngokuyinhloko, ukuhanjiswa kogaxekile kuphazamisa idatha esetshenziswa yi-Google Analytics,ngaleyo ndlela ethula imibiko ephazamisayo. Ukuba khona kwabo kusho ukuqondisa isikhathi sokuhlunga ngezikhathi zogaxekile, okungenzeka ukuthi abathengisi bangase bachitheukwenza ezinye izinjongo zokukhiqiza kusayithi. Ngaphandle kokungazi ukuthi isayithi lihlala libhekene nokudluliselwa kogaxekile, omunye angase apheliseizinqumo ezingathinta ukwenziwa kwe-SEO nokusezingeni.
Ukuvikelwa kokudluliselwa kogaxekile
Uma umuntu echaza inkinga kungenzeka evela endleleni i-Google Analytics ikhiqiza ngayoimibiko yayo, bangazama ukukuhlunga kusuka kuzibalo. Noma kunjalo, lokhu akusona isiqinisekiso sokuthi lezi zizinda ngeke zibuyele emuva.
Kuyinto elula ukukwenza lokhu uma kugxile ekususeni okungafunwaumgwaqo ozenzakalelayo. Izinkinga ezithinta iwebhusayithi, uma kuziwa ekudlulisweni kokugaxekile, zilele kufayela ".htaccess". Ababhulogi abaningi basikiselaukuthi abantu bangasebenzisa ifayela ngokwayo ukuze basuse ithrekhi engadingeki. Noma kunjalo, ifayela elibuchwepheshe futhi liqukethe kakhuluizilungiselelo eziningi zesizinda kanye nokuhlelwa kabusha. Ngakho-ke, ukwenza iphutha elilula ngaphandle kokucaca kwalokho okudingeka kwenziwe, kungalimazaimpembelelo kuwebhusayithi. Kuwukuhlakanipha ukuba nabathuthukisi abanolwazi bakwazi ukuphatha ifayela ngokuphepha.
Ifayela le-.htaccess lingavimbela bonke abahlaseli, futhi basule umlando wabo kusayithi.Noma kunjalo, ukudluliswa komoya kungadinga umzamo omkhulu. Isigaba esiphezulu ku-Google Analytics sisebenza kahle lapha, uma uzama ukukhulaokubi kunazo zonke lezi zihanjiswa.